एउटा बहादुर सिपाहीको अन्येष्टी : जसले अरुको लाश खोज्दा आफ्नो जीवन गुमाए ! – नेपाली सूर्य
October 31, 2017 Nepali SuryaLeaveaComment on एउटा बहादुर सिपाहीको अन्येष्टी : जसले अरुको लाश खोज्दा आफ्नो जीवन गुमाए !
मृतक कुँवरले नेपाल प्रहरीको पोखरा स्थित विपद् उद्धार टोलीमा रहेर धेरै जनाको ज्यान बचाएको तथा उद्दारमा दिलो ज्यान दिएर आँफूलाई अब्बल साबित गरेका थिए । उनले फेवातालमा डुबेका धेरै जनालाई जीवितै उद्धार गरेका थिए विभिन्न विपदका घटनामा वेपत्ता बनेकाहरुलाई जीवित तथा मृत उद्धार गरेका थिए । २६ वर्षिय कुँवर २०६६ सालबाट नेपाल प्रहरीमा कार्यरत रहेका थिए ।
खोलामा तथा तालमा ६ मिनेटसम्म डुबेर खोज्न सक्ने उनी करिब १५ मिनेटसम्म बाहिर नआएपछि स्थानीयवासीले १ जना प्रहरी बेपत्ता भएको जानकारी दिएपछि मात्रै उनको खोजी भयो । उनको उद्धार समेत समायमा नहुँदा मृत्यू भएको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ ।
खोलामा पसेपछि उनी पनि हिलामो गाडीएर मुख नाकमा लेदो भरिएपछि मृत्यू भएको बताईएको छ । घटनमा प्रहरी कमजोरी भएको र प्रहरीले आफ्नै साथीको समेत उद्धार गर्न नसकेको परिवारको आरोप छ ।
नेपाल प्रहरीमा रहेर कर्तव्य पालनका शिलसिलमा धेरैको ज्यान बचाउन सफल भएका कुँवरको अरुको लाश खोज्ने क्रममा आफ्नो जीवन समाप्त भयो । कर्तव्य पालनमा भएको मृत्यूले ठूलीपोखरी गाउँ तथा पर्वत जिल्ला नै शोकमग्न बनेको छ । मृतक कुँवरको चिरशान्तिको कामना सहित सुचनाकेन्द्र डट कमको तर्फबाट समेत भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली ।